राष्ट्रपतिका सामु नेकपाका नेता भिम आचार्यलाई सेनाले उठाएपछि ....
राष्ट्रपतिका सामु नेकपाका नेता भिम आचार्यलाई सेनाले उठाएपछि ….
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २७, २०७५ समय: १४:३०:४४
अर्काको कुरा नगरौं भनो घटना क्रम त्यस्तै हुन्छ अनी आफुलाई खसखसाएर हैरान । कति कुरी कुरी गर्नु जति गरे पनि कोही नसुध्रने । पढ्नुहोस् एउटा घनाक्रम अनि आफै विश्लेषण गर्नुस् । घटना हो २०७५ साल माघ २६ गते । स्थान हो सुनसरीको प्रसिद्ध धार्मीक स्थल चतरधाम । प्रसंग छ शनिबारबाट सुरु भएको श्रीराम तारकब्रह्म महायज्ञको । महायज्ञको उद्घाटन गर्न राष्ट्रपति पाल्नु भएको थियो । अव राष्ट्रपति आएपछि १ नम्वर प्रदेशका प्राय सवै नेता जनप्रतिनिधी आउने त भै हाले । कति निम्ता गरेर आए कति निम्ता नगरि । त्यो कार्यक्रममा पुग्नेहरुलाई नै थाहा होला । हामीले त कार्यक्रममा मात्रै देखेका हुम् क्यारे ।
कोशी नदीको तटमा जगदगुरु श्री रामानन्दाचार्य सेवापीठले आयोना गरेको महायज्ञ । महायज्ञको उद्धघाटन गर्ने प्रमुख ब्यक्ती राष्ट्रपति । अव राष्ट्रपति आएपछि सवै सेडुल राष्ट्रपति कार्यालयबाट आउने भै हाल्यो । कसले वोल्ने देखी को कहाँ कहाँ वस्ने सम्म । अरुकुरा अरुदिन गरौंला सुरुमा वस्ने कुरो गर्छु ।
आफ्नो वस्ने स्थान थाहा नपाउदा पनि वढो अफ्ठेरो हुँदो रैछ । त्यस्तै अफ्ठेरो भो ठूलै पुहँच भएका नेतालाई । उनी यो प्रदेशका सवै भन्दा ठूला नेता ठान्छन् आफूलाई । हुन पनि हो । चुनवका बेला टिकट उनैले बाँडे । कसलाई मेयर बनाउने ? कसलाई संसद बनाउने उनेको हातमा रह्यो । हुन त उनी मन्त्री पनि भइसकेका । नेकपाका प्रदेस संयोजक पनि । उनी झण्डै मुख्यमन्त्री पनि भएका , मुख्यमन्त्रीको दौडमा सवै भन्दा अगाडि पनि भएका । तर मुख्यमन्त्री हुने बेलामा भने तीन बल्ड्यांग चिप्लिएका । यति भनेपछि नाम पनि किन नलेख्नु ? उनको नाम हो प्रदेश संसद भिम आर्चाय । यति ठूलो नेता तर महायज्ञमा जे भयो म जस्तो बुवुरोलाई पनि लाजले सरम भो । उनलाई के भो उनै जानुन् । सुन्नुस् सुन्नुस् पुरा कुरो ।
राष्ट्रपतिको रातो कार्पेटबाट कार्यक्रम स्थल तर्फ सवारी हुदै थियो । राष्ट्रपति आउनु अगावै सवै अतिथीको आसन ग्रहण भईसकेको थियो । मर्यादाक्रम अनसार नै थियो । त्यसै क्रममा सवै अतिथिको आसन ग्रहण हुदै थियो । मर्यादाक्रम अनुसार वस्ने ब्यवस्था गरीएको थियो । स्टेजको बाँया साईडमा दाता,आयोजक र सहयोगीहरु रहने ब्यवस्था गरीएको थियो । दाँया साईडमा जनप्रतिनिधीहरुको कुर्सी । उद्घोषकले सवैको अतिथि आसन ग्रहण गराँउदै थिए । उद्घोषकले
त्यतिकैमा भिम आर्चायलाई पनि अतिथि आसान ग्रहण गराए । प्रदेश सभासद हुन् आसान ग्रहण नहुने कुरै भएन तर कुरो यहाँ गडवड भो । अन्य अतिथि लाई आसन ग्रहण गर्दा मर्यादा अनुसार जता भनिएको थियो । त्यही गएर वसे तर आचार्यले भने त्यसो गरेनन् । हुनत उनको निर्वाचन क्षेत्र, उनिहरुकै पार्टीबाट वनेकी राष्ट्रपति । अलिकतीत दम्भ हुनु पनि स्वभाविक नै हो । उनको नाम आसन ग्रहणमा आउन साथ पार्टीको कार्यक्रम जस्तो गरी हात हल्लाउदै स्टेजको अघिल्लो पंक्तिमा गएर वसे । जुन राष्ट्रपति सहित अति विशिष्ट ब्यक्तीहरु रहने गरि मिलाईएको थियो ।
उनि यसरी वसेकि मानौ नेकपा को कार्यक्रम भईरहेको छ । माना उनले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका छन् । कार्यक्रम सुरु भयो स्टेजमा राष्ट्रपतिको आगन भयो । राष्ट्रपति आउन साथ राष्ट्रिय धुन वज्यो । सवैले सम्मान गरे । आ आफ्नो स्थानमा वसे । वसाईको सेडुल अनुसार राष्ट्रपतिकी आमालाई वस्ने स्थान पुगेन । राष्ट्रपतिको सुरक्षमा खटिएका अंगरक्षकले आमालाई वस्ने स्थान नदेखेर तर्सीए । उनले चेपेर ल्याएको फायल खोलेर हेरे । त्यसपछि भिम आचार्यलाई कोट्याउदै भने तपाई को, यहाँ किन वसेको ? तपाईको त यहाँ वस्ने लाईन नै छैन । उनले फायल खोलेर देखाउदै भने । आचार्य झस्किदै उठे । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बा र मुख्य मन्त्री सेरधन राई मुखामुख गरे । सेनाले आचार्य लाई उठाएर तपाईको स्थान उता हो भन्दै स्टेजको दाँया साईड देखाए । त्यसपछि उनलई अप्mनो स्थानमा । कुरो के रहेछ भने भिम अचार्य बसको स्थान राष्ट्रिपतिकी आमालाई बस्न मिलाइएको रैछ ।
त्यसपछि भिम कामरेड अक्क न वक्क परेपछि मुख्यमन्त्री राईले ति अंगरक्षकलाई कानमा खसाक खुसुक गरे । त्यसपछि अंगरक्षकले फलामको कुर्सी ल्याईदिए । मुख्यमन्त्री छेउमा राखीदिए । उनि त्यही वसे । ओ हो त्यसपछि भिम आचार्यको छटपटी । विचरा, न वस्नु न उठ्नु ? हैन माननीय ज्यु आफ्नो वस्ने स्थान त जान्नु पर्यो नि हौ हैन त ? (सञ्चारपाटी)